KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Atamfo antumi amma wɔannyae adwuma no (1-14)
Bere a wɔreyɛ adwuma nyinaa na wokurakura akode (15-23)
4 Bere a Sanbalat+ tee sɛ yɛresan ato ɔfasu no, ɛyɛɛ no yaw na ne bo fuwii paa, na daa na odi Yudafo no ho fɛw. 2 Ɔkae wɔ ne nuanom ne Samaria asraafokuw no anim sɛ: “Dɛn na Yudafo a wonni ahoɔden yi reyɛ yi? Dɛn koraa na wobetumi ayɛ? Wobetumi abɔ afɔre? Wobetumi de da koro awie? Abo dedaw a ahyew awu a esum hɔ yi, wobetumi de ayɛ adepa bi?”+ 3 Ammonni+ Tobia+ a ogyina ne nkyɛn no nso kae sɛ: “Abo fasu a wɔreto yi, sakraman mpo betumi abubu agu.” 4 O yɛn Nyankopɔn tie, nkurɔfo yi rebu yɛn animtiaa;+ ma animguase no mmegu wɔn ankasa atifi,+ na ma nkurɔfo nsoa wɔn nkɔ obi man so. 5 Nkata wɔn amumɔyɛ ne wɔn bɔne so, na mmu w’ani nngu so,+ efisɛ wɔn a wɔreto ɔfasu no, wɔayeyaw wɔn. 6 Enti yɛkɔɔ so too ɔfasu no, na ne nyinaa keka sisii anim, na yɛto kɔɔ soro koduu mfinimfini. Ɔman no de koma pa toaa so yɛɛ adwuma no. 7 Bere a Sanbalat ne Tobia+ ne Arabiafo,+ Ammonfo, ne Asdodfo+ tee sɛ Yerusalem afasu a wɔresiesie no renya nkɔso na akwan a ɛdeda mu no, wɔafi ase rekeka si anim no, wɔn bo fuwii paa. 8 Enti wɔn nyinaa bɔɔ pɔw sɛ wɔne Yerusalem bɛba abɛko ama basabasayɛ aba hɔ. 9 Ɛnna yɛbɔɔ yɛn Nyankopɔn mpae, na yɛde awɛmfo sisii hɔ awia ne anadwo. 10 Nanso na Yudafo no rekeka sɛ: “Wɔn a wɔsoasoa nneɛma no ahoɔden asa, na nwura nso sunsum hɔ pii; yɛrentumi nto ɔfasu no da.” 11 Yɛn atamfo nso kekae sɛ: “Wɔn ani bɛba wɔn ho so no, na yɛakɔ wɔn mu akokunkum wɔn ama adwuma no aka.” 12 Na bere biara a Yudafo a wɔtete bɛn wɔn no bɛba no, na wɔtaa ka kyerɛ yɛn* sɛ: “Atamfo no befi mmeae nyinaa aba yɛn so.” 13 Enti memaa mmarima kogyinagyinaa ɔfasu no ho, baabi a ɛwɔ fam a ɛhɔ da hɔ. Memaa nnipa no gyinagyinaa mmusua mmusua, na wɔde asekan ne mpeaw ne agyan wɛnee. 14 Bere a mihui sɛ ehu aka wɔn no, ntɛm ara na mesɔre ka kyerɛɛ atitiriw+ ne asoafo ne nnipa a aka no sɛ: “Munnsuro wɔn.+ Yehowa, nea ɔyɛ kɛse na ne ho yɛ hu no,+ ɔno na monkae no; monko mma mo nuanom ne mo mma mmarima ne mo mma mmea ne mo yerenom ne mo afi.” 15 Bere a yɛn atamfo no tee sɛ yɛn ho adwene a wɔafa no, yɛate na nokware Nyankopɔn no asɛe wɔn agyinatu no, yɛn nyinaa san kɔtoaa so yɛɛ ɔfasu no ho adwuma. 16 Efi saa da no, me mmerante no fã yɛɛ adwuma,+ na fã nso kurakuraa mpeaw ne akyɛm ne agyan, na wɔhyehyɛɛ dade ataade; na mpanyimfo+ no gyinaa Yudafo a 17 wɔreto ɔfasu no nyinaa akyi. Wɔn a wɔsoasoa nneɛma no de wɔn nsa baako yɛɛ adwuma, na wɔde baako nso kuraa akode. 18 Wɔn a wɔreto ɔfasu no mu biara de ne sekan bɔɔ n’asen bere a ɔreyɛ adwuma no, na nea ɔbɛbɔ abɛn no nso,+ na ogyina me nkyɛn. 19 Ɛnna meka kyerɛɛ atitiriw ne asoafo ne nnipa a wɔaka no sɛ: “Adwuma no sõ na ɛtrɛw; yɛn ntam atetew wɔ ɔfasu no ho na obiara ne ne yɔnko ntam twe. 20 Sɛ mote sɛ wɔrebɔ abɛn no a, mommoaboa mo ho ano mmra baabi a yɛwɔ no. Yɛn Nyankopɔn bɛko ama yɛn.”+ 21 Ɛno nti, yɛkɔɔ so yɛɛ adwuma no, na yɛn mu fã nso kurakuraa mpeaw fi adekyee kosii sɛ nsoromma puei. 22 Saa bere no, meka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: “Momma mmarima no mu biara ne ne somfo nna Yerusalem, na wɔbɛwɛn yɛn anadwo na wɔayɛ adwuma awia.” 23 Enti me ne me nuanom ne m’asomfo+ ne mmarima a wɔwɛn me a wodi m’akyi no anyiyi yɛn ntaade, na obiara kuraa n’akode wɔ ne nsa nifa mu.
^ Nt., “na wɔka kyerɛ yɛn mpɛn du.”